Bangi, xisaab bangi, kaar bangi, bangiga intarnatka, BankID iyo Swish | Information om Sverige
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Dhaqaale / Bangi, xisaab bangi, kaar bangi, bangiga intarnatka, BankID iyo Swish
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 3 4 2019
bangi, xisaab bangi, kaar bangi, bangiga intarnatka. Waxaad xitaa akhrin kartaa waxa ku saabsan sida BankID iyo Swish u shaqeeyaan.
Bangiga intarnatka ee dadka gaarka ah waxaad ku bixin kartaa xisaabaha, saxeexida caymisyo kana arkaysaa amaahyahaaga markaad doonaysid. Bangiga intarnatka waxaa kale oo hela caruurta iyo dhalinyarada iyo adigaaga leh shirkad gaar ah. Dhanka bangiga intarnatka waxaad ku samayn kartaa arimahaaga bangiga si xasiloon marka aad doonaysid. Markaad gasho waxaad si sahlan u arkaysaa xisaabahaaga, kaarkaaga, deynkaaga iyo hantidaada.
Swish – dirida iyo gudoomid lacag dhanka moobilka
Dhanka Swish waxaad adigoo istcmaalaya moobilkaaga si sahlan uga diri kartaa uguna gudoomi kartaa lacag. Markaad lacag dirayso ama lacag bixin ku samaynayso dhanka Swish waxaa lacagtan laga jarayaa xisaabtaada waxayna gaaraysaa qofka qaadanaya isla il-biriqsiyo ka dib. Waxaa amaankeedu la mid yahay sida xawilaada bangiga. Dhanka shakhsiyaadka gaarka ah waa bilaa kharash in la samaysto Swish ama in la diro ama la gudoomo lacag.
Dheeraad ku saabsan Swish waxaad ka akhrin kartaa bogga intarnatka ee getswish.se.